Hive ဈေးအတက်ဖြင့် အဆင်ပြေကြစေရန် ( Henry Aung ) — HiveHustlers
ခြေခေါက်လဲ နေလည်း ပြန်ထပြေးရတာပါ့။ အဓိက ပြေးလမ်းပေါ်ရောက်နေဖို့လိုတယ်။!LOL. !PIZZA. !LUV
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော Hive စျေးနှုန်း နှင့်အတူ Hive platform ပေါ်တွင် 2022 အားရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော်နေလျှက်ပါ...!PIZZA
၂၀၂၂ ကတော့ Hive ကနေ အောင်မြင်ခြင်းတွေယူ ဆောင်လာပေးပါလိမ့်မယ်။. !LUV. !PIZZA. !LOL
let dance and drink
တွေ ဘာတွေ လုပ်လို့ရပြီ။
တော်လှန်ရေး အပြီး၊ စျေးလည်း အတက်
လာမယ်လေ.... Chevas နဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်နဲ့. !PIZZA. !LUV. !LOL
Power တော့ မဒေါင်းရက်ဘူး ဆာဟင်ရေ...
အစွယ်အပွားလေးတွေတော့ ရောင်းစားမိတယ်။ 😅
အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဆင်ပြေပါစေ.. !PIZZA. !LOL. !LUV
Hive ကမရှိ hive-engine ကတိုကင်တွေက စျေးကျဆိုတော့
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိတော့ပါဘူး အကို
ဟုပါ့။ Hive Engine token တွေ ရောင်းရက်စရာမရှိဘူး။. !PIZZA. !LUV. !LOL
အသုံးမလိုသေးရင်တော့ စောင့်နိုင်လျှင် စောင့်နိုင်သလောက် အကျိုးရှိမည်ဟုထင်ပါသည်။
အမှန်ပါပဲ။ စောင့်နိုင်ရင်တော့ အကျိုးများပါလိမ့်မယ်။ !PIZZA. !LUV
ပြားဘဝက လွတ်နေရင်ကို ပျော်လှပါပြီ။
အခုတော့ လွှတ်သွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ Cryptocurrency ကပြောရတော့ခက်သား ။ $10 လောက် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ဖြစ်သွားရင်တော့ တမျိုးပေါ့။. !PIZZA. !LUV
နှစ်ကုန်နီးရင် coin တေစျေးအတက်ဘက်များတာမို့ hive လည်း ဒိထက်တက်နိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်
ကျွန်တော်လည်း အဲသလိုပဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်။. !LUV. !LOL. !PIZZA
@mamamyanmar, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
Hiveအစွန်းထွက်လေးတွေတော့ အနည်းငယ် ရောင်းကြည့်ချင်သေးပ။
အသီးအပွင့်လေးတွေခူး စားတော့မယ်ပေါ့။. !LOL. !LUV. !PIZZA
@kachinhenry(9/20) tipped @naythan (x1)
myanmarkoko tipped kachinhenry (x1)